युगसम्बाद साप्ताहिक - निर्वाचन सार्नुको औचित्य के ?
निर्वाचन सार्नुको औचित्य के ?
Thursday, 06.22.2017, 12:16pm (GMT+5.5)
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनतापार्टीको माग अनुसार भन्दै प्रदेश नं. २ को असार १४ गते हुने निर्वाचन असोज २ गते गर्ने निर्णय गराउनुभयो । आइतबार मनोनयन सकिएको छ र मनोनयनमा देखिएको उत्साहले प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो निर्णय गरे भन्ने प्रश्न उठाएको छ । देउवाको काम नै निर्वाचन सार्ने मात्रै त हैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । देउवाको थाप्लोमाा प्रजातन्त्र दरबार बुझाएको दोषको भारी छ ।
हुन पनि २०५९ साल असोज १८ गते त्यसको ४० दिनपछि हुनुपर्ने संसदको निर्वाचन माओवादीका कारण गर्न नसकिने भन्दै सार्न राजदरबारमा सिफारिश लिएर गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम प्रधानमन्त्री’ भन्दै पदबाट बर्खास्त गरेका थिए ।
त्यसपछि देउवाको थाप्लोमा अक्षमताको पगरी बस्यो ।
हुन त मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै चुनाव सारिए पनि उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाएका पनि छैनन् र आन्दोलन स्थगित गर्ने घोषणा पनि गरेका छैनन् । तसर्थ यो चुनाव कससका लागि सारिएको हो भन्ने पत्तो छैन । कसको इशारामा दुई प्रदेशको निर्वाचन सारियो ? अहिले चारैतिर यही प्रश्नले घर गरेको छ । मधेशको प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने हो भने राजपामा संलग्न कुनै पनि नेता अहिले जनप्रतिनिधिका रुपमा छैनन् । ती सब निर्वाचन हारेका हुन् । उनीहरूलाई रिझाउन पटकपटक निर्वाचन सार्नुको पछाडि कुन शक्तिको हात छ ? अहिले यो पनि ज्वलन्त प्रश्न बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेपछि दुई हप्ता मात्र बाँकी रहँदा दुई नम्बर प्रदशको निर्वाचन सार्नुको कारण राजपाका नेताहरूलाई सो क्षेत्र सुरक्षित छाड्न हो वा अरु कुनै ग्राण्ड डिजाइनको उपज हो विस्तारै खुल्नेछ । तर गलत मुद्दा बोकेर हिंडेदाहिंड्दा, थकित, गलित र जनाधार गुमाएकाहरूलाई अति महत्व दिएर विदेशी शक्तिको उक्साहटमा मुलुक वर्वाद गर्ने निर्णय गर्नु लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेको पार्टीका सभपातिका लागि सुहाउँदो कुरा हैन ।
आशंका जे थियो, प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही गरे । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपक्षीले समेत दोस्रो चरणको निर्वाचन सकेर मात्र राजीनामा दिनु भन्दा नैतिकताको उच्च अभ्यास भन्दै राजीनामा दिनुको कारण अहिले खुलस्त भएको छ । मधेशवादीहरूलाई रिझाउन नसक्दा नै निर्वाचन दुई चरणमा गरिएको थियो । प्रचण्ड त्यो अपगालबाट बचेका छन् । देउवा भने निर्वाचन गराउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा कीर्तिमान नै कायम गर्ने भएका छन् ।
स्थानीय तह लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, आर्थिक विकासको आधार हो । मुलुकमा दुई तिहाईभन्दा बढी क्षेत्रले विकासको गति लिंदै गर्दा प्रदेश नं. दुईका जनता रमिते बनेर हेरिरहनुपर्ने भएको छ । अहिलेकै अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो क्षेत्रमा अब कहिल्यै निर्वाचन हुँदैन । राजपाका सबै माग पूरा तत्काल पूरा हुने कुनै सम्भावना छैन । उनीहरूले राखेका मागले मधेशी जनताकै चित्त बुझाएको छैन । मधेशी जनता निर्वाचन चाहिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट भैसक्दा किन आधा दर्जन नेतालाई खुसी तुल्याउने यस्तो रमिता सत्तापक्षले देखायो ? अचम्म छ ।
मुलुकको नेतृत्व गर्नेले एउटा सानो झुण्डको आवाज सुन्ने कि आम जनताको ? विदेशीको उपदेश र निर्देशन मान्ने कि स्वदेशको आवश्यकता जनताको चाहनालाई मान्ने ? यसको निक्र्योल गर्न नसक्ने सदैव असक्षम नै हुन्छन् । यस्तै असक्षमहरूको भीडको हातमा मुलुकको वाग्डोर पुगेकाले अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनता आफ्नो गाउँठाउँमा आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्न निकै लालायित थिए र उनीहरू मधेशवादी दलका मुद्दासंग हैन विकास र समृद्धिका मुद्दासंग जोडिएका थिए । प्रदेश दुईमै कथित मधेशीका मसिहा भन्नेहरू लखेटिएका दृष्टान्त छ । सीमापारिबाट भाडाका टट्टु ल्याएर आन्दोलन गर्ने उनीहरूको जनाधार लगभग समाप्त भएकाले त्यसैको जोहोका लागि निर्वाचनको मिति सारिएको हो भने यो सरकारको नालायकी मात्र हैन, मुलुक विखण्डनको विजारोपण हो । राजपाको आन्दोलनलाई विखण्डनकारीहरूको साथ–समर्थन रहनु अनि सरकारले उनीहरूकै माग पूरा गर्न भन्दै निर्वाचन नै स्थगित गर्नु मुलुकमाथि ठूलो घात हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्षको अक्षमता हो । यो अक्षमताको कलंक बोकेर उनीहरूले जनतासामु कसरी शिर ठाडो पार्न सक्लान् ?
प्रधानमन्त्री देउवाले आफूमाथि लागेको अक्षमताको आरोप पखाल्ने स्वर्णिमा मौका मात्र गुमाएनन् अर्को अक्षमताको कलंक समेत बोक्नु आफैंमा घोर विडम्बनाको विषय हो ।